साताको ब्लगर: प्रतिभा चालिसे - MeroReport
साताको ब्लगर: प्रतिभा चालिसे
पोखरा घर भएकी प्रतिभा चालिसे विगत ५ वर्षदेखि श्रीमान् सँगै जापानको टोकियोमा बस्दै आएकी छिन । उनले अर्थशास्त्रमा स्नातक तह सम्म अध्ययन गरेकी छिन् । अहिले उनी जापानमा नाटक सम्बन्धी अध्ययन गर्दै छिन् । उनी जापानमा रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा पनि आवद्ध छिन् ।
प्रतिभा साहित्य र भ्रमणमा निकै रुची राख्छिन् । विशेषगरी साहित्यमा कलम चलाउने प्रतिभा आफ्नो ब्लग PRATIVA ( The Talent )मा कविता लेख्न रुचाउँछिन् । सोच आदान-प्रदान गर्न ब्लगिङ गर्ने गरेकी प्रतिभालाई हामीले यस पटक साताको ब्लगरको रुपमा प्रस्तुत गरेका छौँ :
ब्लगिङमा तपाइँको अनुभवबाट कुरा गरौँ । तपाईंले कहिलेदेखि ब्लगिङ गर्न थाल्नुभयो ?
१४ अगस्ट, २०११ बाट सुरुवात गरेकी थिएँ । लगभग एक वर्ष पुग्न लाग्यो ।
कसरी ब्लगिङ गर्न थाल्नुभयो ?
पहिलेदेखि नै ब्लग खोलुँ जस्तो लाग्थ्यो । तर सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरको प्रयोग गर्न थालेदेखि अरु ब्लगरहरुसँग सम्पर्क भयो अनि ब्लगिङ गर्न थालेँ ।
ब्लगिङ् किन गर्नुहुन्छ ?
साथीहरुसँग आफ्नो सोच आदानप्रदान गर्न र साहित्यमा रुची हुने साथीहरुको सामीप्यताको लागि पनि ब्लगिङ गर्न मन लाग्छ ।
कस्तो विषयवस्तुमा ब्लगिङ गर्न रुचाउनुहुन्छ ?
साहित्यमा । अहिलेसम्म मेरो ब्लगमा साहित्यसँग सम्बन्धित पोस्टहरु नै छन् ।
आफूले लेखेको निकै मन परेको र अरुले पनि रुचाइदिभएको कुनै ब्लग पोस्ट छ ?
मलाई ब्लगमा पोस्ट भएको मध्येमा ‘शहर र म’ कविता मन पर्छ र अहिलेको समयमा पनि यथार्थपूर्ण छ जस्तो लाग्छ ।
तपाईंको ब्लगमा भिजिटर कति हुन्छन्?
अहिलेसम्म १८८८ जनाले हेरीसकेका छन् हुनुहुन्छ । पछिल्लो समयमा भिजिटरको संख्या बढ्दै गैरहेको छ ।
प्रतिकिया कस्तो पाउने गर्नु भएको छ ब्लगमा ?
ब्लग , इमेल र ट्वीटरबाट प्रतिकिया पाउने गर्दछु । राम्रो र हौसला बढाउने खालको प्रतिकिया पाइरहेको छु ।
ब्लगिङ गर्दाको कुनै रमाइलो क्षण छ ?
ब्लगिङ गर्दाको खासै छैन तर प्रतिकिया पाउँदाको क्षण भने रमाइला हुन्छन् ।
अब अरु सोसिअल नेटवर्किङ साइट को कुरा गरौँ । तपाईं अरु कुन - कुन सोसिअल नेटवर्किङ चलाउनुहुन्छ ?
फेसबुक र ट्वीटर चलाउने गर्छु । फेसबुकबाट साथीहरुसँग सम्पर्कमा रहन र ट्वीटर समाचार र विचारको लागि प्रयोग गर्ने गर्दछु ।
कति समय दिनु हुन्छ ?
खासै यति नै समय भनेर छुट्याएको छैन । तर ट्वीटरमा प्रायः सबै समय नै सम्पर्कमा रहन्छु ।
सोसिअल नेटवर्किङ साइटको राम्रो पक्ष र नराम्रो पक्ष के - के हुन ?
प्रयोगकर्तामा भर पर्ने कुरा हो यो । सोसिअल नेटवर्किङ साइटको आफैँमा नराम्रो पक्ष छन जस्तो लाग्दैन ।
अहिलेको समयमा सोसिअल नेटवर्किङ साइट नभएको भए के हुन्थ्यो ?
समाज यति सरल र खुल्ला हुने थिएन ।
हामीले नागरिक पत्रकारिताको प्रवर्द्धन गर्नको लागि मेरोरिपोर्ट सुरु गरेका छौँ । मेरोरिपोर्टको बारेमा तपाईंको के धारणा छ ?
म मेरोरिपोर्टको नियमित भिजिटर हुँ । नागरिक पत्रकारिताको प्रवर्द्धनको क्षेत्रमा मेरोरिपोर्टको प्रयास अति नै सराहनीय छ ।
मेरोरिपोर्टका लागि केही सुझाव छन् ?
सुझाव भन्दा पनि शुभ-कामना छ मेरोरिपोर्टलाई । अझै धेरै ब्लगरलाई समेट्न सकोस ।
प्रतिभाको ब्लग: http://meprativa.wordpress.com/
नोट: के तपाइं पनि ब्लगिङ गर्नुहुन्छ? यदि गर्नुहुन्छ भने तपाइं पनि यो स्तम्भमा फिचर हुन सक्नुहुन्छ । कृपया आफ्नो ब्लग लिङ्क हामीलाइ पठाउनुहोस् । वा आफ्नो ब्लगको विवरण cj@meroreport.netमा इमेल गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ । तपाइंको ब्लग हेरेर हामीले निर्णय गर्नेछौं ।
डा. सूर्य पराजुली
काकाबा (हरि न्यौपाने)
महेश सागर खनाल
Comment by Shaku Limbu on June 9, 2012 at 7:47am
congratulations to you Prativa, I recognise you straightaway, you are my twitter buddy. Keep blogging. :)
Comment by Pagal Basti on June 6, 2012 at 7:10pm
बधाइ हाम्रा तर्फबाट पनि स्विकार होस
Comment by Amuna Chapagain on June 6, 2012 at 4:44pm
धेरै धेरै वधाई
Comment by Ananta Koirala on June 6, 2012 at 3:57pm
वधाई तथा शुभकामना !!! राम्रा रचनाहरू पढ्न पाइयोस् :)
Comment by Nirajan Sinkhada (Niran) on June 6, 2012 at 3:46pm
बधाई छ प्रतिभाजी
Comment by sabinsingh on June 6, 2012 at 3:40pm
बधाइ छ । गज्जबका सिर्जनाहरू अझै सिर्जित होस् ।
Comment by Indra Dhoj Kshetri on June 6, 2012 at 3:18pm
लौ चालिसेजीलाई बधाई छ । अझ धेरै पढ्न पाइयोस् । :)